Ukuzimela: Isehlakalo Sesithathu | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Uma ukuzalwa komuntu nokukhula kwakhe “kuyinkathi yokulungiselela” uhambo lomuntu empilweni, kubeka isisekelo sokudalelwa komuntu, khona-ke ukuzimela komuntu kulungiselela ukudalelwa komuntu ekuphileni. Uma ukuzalwa komuntu nokukhula kwakhe kuwumcebo abawuqongelele wesiphetho sabo ekuphileni, khona-ke ukuzimela komuntu kuyinkathi yokuqala ukuwusebenzisa noma ukwenezela kuleyo ngcebo. Lapho othile eshiya abazali bakhe futhi ezimela, izimo zenhlalo abhekana nazo, nohlobo lomsebenzi nekusasa lakhe, kokubili kunqunywa ukudalelwa futhi akuhlangene nalutho nabazali bakhe. Abanye abantu bakhetha imfundo enhle emakolishi bagcine sebethole umsebenzi obagculisayo ngemva kokuthola iziqu, okuyinjabulo yokuqala abayithola ohambweni lwempilo yabo. Abanye abantu bafunda baze babe ngompetha bamakhono athile kodwa bengawutholi umsebenzi abawufunayo, bengatholi ikusasa abalifunayo; ekuqaleni kohambo lwabo empilweni yonke into ibonakala ingahlangani, kugcwele izinkinga, amathemba abo eshabalala nokuphila kwabo kungaqiniseki. Abanye abantu bayazinikela ezifundweni zabo, kodwa balahlekelwe amathuba okuthola imfundo ephakeme, kubonakala bedalelwe ukungayitholi impumelelo, amathemba okuqala empilweni yabo aphenduka aphelele emoyeni. Bengazi[d] noma umgwaqo ongaphambi kwabo muhle noma unamatshe, bakuzwa okokuqala ukungafani kwekusasa labantu, futhi baba nethemba nokwesaba ekuphileni. Abanye abantu, ngaphandle kokungafundi kakhulu, babhala izincwadi, bathole udumo oluthile; abanye nakuba cishe bengafundile ngokuphelele, benza imali emabhizinisini ukuze bakwazi ukuphila…. Mayelana nendlela yokuphila umuntu ayikhethayo nendlela aphila ngayo: ingabe abantu bangakwazi ukulawula ukuthi benza isinqumo esihle noma esibi? Ingabe bayahambisana nesifiso kanye nezinqumo zabo? Abanye bafisa sengathi bangasebenza kancane bahole kakhulu, bengashiswa yilanga noma banethwe yimvula, bagqoke kahle, bacwebezele ngazo zonke izindlela, babe ngaphezu kwabanye, benze okhokho babo bahlonipheke. Izifiso zabantu zinhle kakhulu, kodwa lapho abantu bethatha isinyathelo sokuqala ekuphileni kwabo, bavame ukubona ukuthi asiphelele kangakanani isiphetho somuntu, futhi baqala lapho ukuqonda ngempela iqiniso lokuthi, nakuba umuntu angase ahlele izinto ezinkulu ngekusasa lakhe, nakuba angase asebenzele ukufeza amaphupho amakhulu, akekho onekhono noma amandla okubona amaphupho akhe, akekho ongakwazi ukulawula ikusasa lakhe. Kuyohlale kunegebe elikhona phakathi kwephupho lomuntu nento engokoqobo umuntu okumele abhekane nayo; izinto azenzeki ngendlela umuntu abengafisa ngayo, abantu ababhekene nezinto ezinjalo ekuphileni abasoze bathola ukwaneliseka noma ukugculiseka. Abanye abantu bangaze benze ngisho nezinto ezingacabangeki, benze imizamo emikhulu futhi banikele ngezinto ezinkulu ngenxa yokuziphilisa nekusasa labo, ngomzamo wokushintsha ukudalelwa kwabo. Kodwa ekugcineni, ngisho noma bengawafinyelela amaphupho nezifiso zabo ngenxa yokusebenza kanzima, abasoze bashintsha ukudalelwa kwabo, kungakhathaliseki ukuthi bazama kangakanani ukushintsha lokho ikusasa elibabekele khona. Akunandaba ukuthi abantu bahlukene kangakanani ngokwamakhono, izinga lokuhlakanipha, namandla, bonke abantu bayalingana ekudalelweni, lokho okwenza ungabi bikho umehluko phakathi kokukhulu nokuncane, kokuphakeme nokuphansi, kophezulu nompofu. Ukuthi yimuphi umsebenzi wokuziphilisa umuntu awuphishekelayo, lokho umuntu akwenzayo ukuze aziphilise, kanye nomcebo umuntu awuqongelelayo ekuphileni akunqunywa abazali bakhe, amakhono akhe, umzamo wakhe noma izifiso zakhe, kodwa kunqunywa kusengaphambili uMdali.
Lapho umuntu evuthwa, uyakwazi ukushiya abazali bakhe azizabalazele, futhi kukuleli qophelo lapho umuntu aqala khona ngempela ukudlala indima yakhe, lapho umsebenzi wakhe ucaca khona nakakhulu. Ngokwegama umuntu usahlobene kakhulu nabazali bakhe, kodwa ngenxa yomsebenzi wakhe indima ayidlalayo ekuphileni, ayihlanganise lutho nonina noma uyise, eqinisweni ukusondelana kuya ngokuya kuphela njengoba umuntu ezimela kancane kancane. Ngokombono wemvelo, abantu ngeke bayeke ukuncika kubazali babo ngezindlela eziningi, kodwa eqinisweni, uma sebekhulile baphila ukuphila okuhluke kakhulu kokwabazali babo, futhi bayokwenza izinto ngendlela yabo. Ngaphandle kokuzala nokukhulisa ingane, isibopho sabazali ekuphileni kwengane ukuyinakekela ngendawo ekahle abazoyikhulisela kuyo, akukho lutho ngaphandle kokunquma kusengaphambili koMdali okungaba nomthelela ngokudalelwa komuntu. Akekho ongalawula ukuthi luhlobo luni lwekusasa umuntu ayoba nalo; kade lanqunywa ngaphambi kwesikhathi, akukho ngisho nomzali oyedwa ongashintsha ukudalelwa komuntu. Uma nje kukhulunywa ngokudalelwa, akekho oncike komunye, wonke umuntu unokudalelwa kwakhe. Ngakho abekho abazali abangavimba ukudalelwa komuntu ekuphileni noma babe nethonya elincane endimeni ingane eyidlalayo ekuphileni. Kungashiwo ukuthi umndeni umuntu azalwa kuwo, nendawo akhulela kuyo, kuyizimo ezihlelwe ngaphambili zokufeza umsebenzi womuntu ekuphileni. Azinqumi nangayiphi indlela ukudalelwa komuntu ekuphileni noma indawo aphokophele kuyo lapho umuntu efeza umsebenzi wakhe. Ngakho abekho abazali abangasiza umuntu afeze umsebenzi wakhe, azikho izihlobo ezingadlalela umuntu indima yakhe ekuphileni. Indlela umuntu afeza ngayo umsebenzi wakhe nendawo umuntu enza umsebenzi wakhe kuyo konke kunqunywa ngokuphelele ukudalelwa komuntu empilweni. Ngamanye amazwi, azikho izimo ezingathonya umsebenzi womuntu, ezinqunywe uMdali ngaphambi kwesikhathi. Bonke abantu bavuthwa ezimweni abakhula kuzo, bese kancane kancane, beqala uhambo lwabo ekuphileni, bafeze iziphetho abahlelelwe zona uMdali, ngokuvamile, bazingenele ngothando olwandle olukhulu lwesintu futhi benze okuqondene nabo ekuphileni, lapho beqala khona ukufeza izibopho zabo njengabantu abadaliwe, benza lokho ngenxa yalokho okunqunywe uMdali ngaphambi kwesikhathi, ngenxa yobukhosi Bakhe.
Okwedlule：Ukukhula: Isehlakalo Sesibili
Okulandelayo：Umshado: Isehlakalo Sesine